बारेकोटमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृ,x त्यु – Dainik Sangalo
बारेकोटमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृ,x त्यु
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २७, २०७८ समय: १३:३९:३३
जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर एक जनाको मृ,x त्यु भएको छ ।
शनिबार बेलुकी पाँच बजे परेको चट्याङले बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडाकी १६ वर्षीया सम्झना गिरीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शनिबार बेलुकी अन्दाजी ५ बजेतिर गोठालो गएको बेला रामीडाँडा चौरमा चट्याङ लागेर उनको मृ,x त्यु भएको हो ।
एकाग्रता बढाउन प्राणायाम धेरै उपयोगी छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले ज्ञान मुद्रामा भुइँमा बस्नुहोस् । अर्थात्, कम्मर र मेरुदण्ड सीधा राख्नुहोस् र घुँडा दोबारेर त्यसैमाथि हात राख्नुहोस् । अगाडि केही वस्तु राख्नुहोस् र त्यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नुहोस् । लामो र गहिरो सास लिनुहोस् । बिस्तारै सास लिनुहोस् र त्यसपछि छोड्नुहोस् । कम्तीमा तीनदेखि ५ मिनेटसम्म यो विधिले योग गर्नुहोस् ।ध्यान भट्किन लाग्यो भने फेरि त्यसमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । लामो सास तान्नुहोस् । यो योगासनको नियमित अभ्यासले बच्चाहरुमा एकाग्रता बढ्दै जान्छ । यस बाहेक याद गर्ने क्षमता पनि यो आसनको अभ्याससँगैै बढ्छ र बेचैन मन शान्त हुन्छ ।
२. औंलाको मद्दतले ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्यो. आसन प्रयोगमा निकै सजिलो आसन हो । यसका लागि भुइँमा एउटा चकटी बिछ्याएर पहिले जस्तै मुद्रामा बस्नुहोस्, मेरुदण्डलाई सीधा राख्नुहोस् । अब अगाडितिर आफ्नो दाहिने हात फैलाउँदै लगेर मुट्ठी बन्द गर्ने र औंला बिस्तारै घुमाएर त्यसलाई पुरानै अवस्थामा लैजानुहोस् ।
यो आसन गर्नका लागि भुइँमा सीधा उभिनुहोस् । आफ्नो खुट्टा बीच एउटा सानो अन्तर राख्नुहोस् । एउटा खुट्टा उठाउनुहोस् र बिस्तारै यसलाई तिघ्रातिर ल्याउनुहोस् । जाँघमा एउटा खुट्टा राख्दै अर्को खुट्टासँग सन्तुलन बनाउनुहोस् । यो स्थितिमा तपाईंको दुवै हात माथि उठाउनुहोस् र उनीहरुलाई सीधा राख्दै नमस्तेको स्थितिमा जोड्नुहोस् । यस बीचमा अगाडि हेरिरहनुहोस् र गहिरो सास लिइरहनुहोस् । जबसम्म तपाईं यो स्थितिमा रहन सक्नुहुन्छ । अब बिस्तारै तपाईंको हात बिस्तारै तल ल्याउनुहोस् र त्यसपछि सीधा उभिनुहोस् र अर्को खुट्टासँग उस्तै तरिकाले गर्नुहोस् ।
Last Updated on: September 12th, 2021 at 1:39 pm